Waxbarashada Awoodaha Korantada Duaal - GO! SPECTRUM SCHOOL (7e SPECIALIZATION YEAR // DUAL // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
spectrum School > koorsooyinka our > 7e sannadka khaaska ah > Injineerka korontada
In 7e sannadka khaaska ah Engineerka korontada (dual / BSO) waxaad ku takhasusay aqoon isweydaarsiga, dayactirka iyo dayactirka wiishka, albaabada, kor u qaadayaasha (farsamada, sayniska kombiyuutarka, pneumatica, hydraulics); dhinaca kale ee qaybinta tamarta, wadidda iyo tiknoolajiyadda xoogga leh. Waa mid tababarka dhabta ah. Mashruucyo iyo layliyo, waxaad kordhinaysaa aqoontaada ku saabsan kumbuyuutarrada iyo farsamooyinka automation. Waxaad baraneysaa inaad siiso shaqo tayo leh ishaada ammaanka, caafimaadka iyo deegaanka.
Buuxiyey dual Learning waxaad isku soo dubaridan kartaa aduunka ugu wanaagsan 2: barashada dugsiga iyo barashada goobta shaqada. Waxaad maalmaha 3 ku isticmaashaa dabaqa shaqada. Waxaad baran doontaa maaddooyinka guud iyo aqoonta barashada ee barashadaada ee dugsiga.
Waxaad tagi doontaa maalmaha 2 maadooyinka guud, maadooyinka falsafadaada, isboortiga iyo aqoonta cilmiga ah ee la xidhiidha shahaadadaada. Waxaad shaqayn doontaa maalmaha kale ee 3. Waxaad la socotaa dhaqdhaqaaqaaga ku jira diiwaankaaga. Macallinkaaga macallinimada ayaa kula socodsiin doona horumarkaaga si wadajir ah, adigoo la tashanaya macaamiisha goobta shaqada.
Muxuu u doortaa laba waxbarasho?
Waxaad baran jawi shaqo oo dhab ah
Waxaad la kordhiyo fursadaha shaqada
Waxaad ku raacsan tahay qalabkii ugu dambeeyey iyo tiknoolajiyada
Barashada adigoo samaynaya korodhka dhiirogelin.
Waxaad ku tababarataa xirfado jilicsan oo muhiim u ah suuqa shaqada, sida iskaashiga, qaadashada, wakhtiga ku habboon, ...
> Dhammaan macluumaadka ku saabsan barashada laba-geesoodka
Waxaad tahay sax
Waxaad leedahay il for faahfaahsan
Ma xiiseyneysaa qalabka korontada iyo mashiinada? Miyaad munaaqashooneysaa oo saxantahay? Ma jeceshahay inaad la shaqeyso gacmahaaga, laakin sidoo kale kombiyuutarka? Ma jeclaan lahayd inaad barato inaad ku biirto shaqada?
Waxaad gali kartaa 7 oo keliya sannadkii haddii aad heshay ugu yaraan shahaadada waxbarashada dugsiga sare. Fikrad ahaan, waxaad hore u heshay tababarka berrinka korontada: korontada of Qalabka Korantada Dual.
Haddii aad gudbisid koorsadan waxaad heli doontaa Dibloomada waxbarashada dugsiga sare oo waxaad bilaabi kartaa inaad shaqeyso ama sii wadato waxbarashada. Xirfadaha suurtagalka ah waa dayactirka korantada, farsamoyaqaanada elektarooniga ah, koronto yaqaan, iwm. Waxaad sii wadan kartaa barashada. Daraasad sare (se-n-se, HBO, bachelor xirfad leh) oo ku dhex jira edebta ayaa ka mid ah fursadaha. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa halkan.
Tixraac miiska casharka ee 7e sannadka khaaska ah ee injineerada korantada Daalaal (BSO) halkan:
Qarsoodi (36KB, .pdf)